Gudoonka Gollaha Shacabka oo ku kala qeybsay Mooshinka Farmaajo
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoonka Gollaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala qayb-samay Mooshinka xilka qaadista ee laga gudbiyay Madaxwayne Farmaajo, kaasi oo uu qaybtay Afhayeenka Aqalka Hoose Maxamed Mursal.
Mooshinkaan oo ay saxiixeen in ka badan 92 mudane ayaa ujeedkiisu wuxuu yahay inay xilka ka qaadaan Madaxwaynaha oo ay ugu jeediyeen eedaymo cul-culus, kuwaasi oo qaarkood dastuurka lugaha lagalaya.
Gudoomiye ku xigeenada Gollaha Shacabka, Cabdiwali Ibraahim Muudey iyo Mahad Cabdalla Cawad, oo ka jawaabay qabashada Mursal ayaa ku tilmamaay mid lagu deg-degay oo aanan lagala tagelin.
Muudey iyo Cawad ayaa si cad uga soo horjeestay talaabada uu qaaday Mursal, ayaa hadalkooda waxa uu kusoo beegmayaa kadib markii ay Villa Hargeysa isugu yeereen mudanayaal daafaca Farmaajo.
"Gudoomiyaha siduu ugu deg-degay inuu qabto Mooshinka, waxaa nooga muuqatay inuu xanaaqsanaa, kamana uusan fiirsan arintaasi, waxaana rabnaa inaan umadda u sheegno in arintaan eedeeda wixii ka yimaada uu leeyahay Mursal," ayuu yiri Muudey.
Sida laga soo xigtay nuqu kamid ah Mooshinka laga gudbiyay Madaxwaynaha, waxyaabaha ugu waawayn ee lagu haysto waxaa kamid ah ku tagrifal awoodeed, xabinta iyo xadgudubka dastuurka iyo inuu galay heshiis qarsoodi ah.
Tani ayaa laga cabsi qabaa inay dalka cagaha usii geliso xaalad cakiran oo siyaasadeed, taasi oo hakad gelin karta dhamaan qorshayaasha xukuumadda udegan ee ku wajahan Hiigsiga 2020-ka iyo arrimo oo muhiim ah.
Sida uu qabo Dastuurka KMG ah ee dalka uu leeyahay, marka Madaxwaynaha xilka laga qaadayo oo ay soo jeediyaan Sharci-dejiyaasha waxaa muhiim ah inay kalsoonida kala noqdaan 1/3 oo Xilldhibaanadda Gollaha Shacab ah.
Xildhibaanno ka boodey derbiga Villa Somalia, lana kulmay Mursal [Sawirro]
Soomaliya 10.12.2018. 23:30
Mahad Salaad ayaa sheegay in waxa ay kusoo arkeen gudaha hoyga Mursal ay ahayd...
Mooshinka Farmaajo iyo Dhaliisha Labada ku Xigeen Midkeebaa Sax ah?
Soomaliya 10.12.2018. 13:37
Xildhibaanada Mooshinka ka gudbiyay Farmaajo oo war culus oo saarey
Soomaliya 11.12.2018. 15:11
Mooshin xilka qaadis ah oo laga keenay Farmaajo iyo Mursal oo qabtey [Akhri Qodobada]
Soomaliya 09.12.2018. 19:31
Farmaajo oo Kulan gaar ah la yeeshay Mursal [Xogta Wadahadalkooda]
Soomaliya 08.11.2018. 09:48